Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland oo baaq u diray dowladda Federaalka – Somali Broadcasting Service
Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland oo baaq u diray dowladda Federaalka
Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland oo markii ugu horreeysay ku shiray magaalada Badhan ee gobolka Sanaag.
ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay fuliso ballan-qaadkii ahaa ka qaybqaadashada dhismaha waddada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland,Axmed Cali Xaashi oo galinkii dambe ee khamiistii guddoomiyay shirka guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Puntland ayaa sheegay dowladda dhexe ee federaalka ah inay dhowr mar ballanqaad u sameysay waddada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo oo hadda la soo gabagabeeyay wajiga koowaad.
“Ma jiro wax ka hirgalay ballan-qaadkii dowladda federaalka oo aan isla ognahay madaxweyne iyo ra’iisul wasaare… Waxaan ugu baaqaya inay soo dedejiyaan.” ayuu yiri Axmed Cali.
“Federaalka waxbadan ayaan ka fileynaa oo ah adduunka waxa uu bixiyo oo aanan wali waxba ka heyn , awal waxaan ugu cududaareynay howl badan oo amni ayay ku jiraan.laakin hadda way soo dhaftay shilinba kama heyno , go’aan waxaan isla qaadanay xukuumad iyo Baarlamaanka , dowladda federaalka waxa ugu horreeya inay waddada nagala qaybgalaan.” ayuu ku daray hadalkiisa guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Gabagabadii, Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland,Axmed Cali Xaashi wuxuu sheegay gobolka Sanaag inay soo gaareen dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo ka soo barakacay dhulka Oramada ee dalka Itoobiya, wuxuuna dowladda federaalka usoo jeediyay inay ka qayb-qaadato dib u dejinta dadkaas.
Author adminmasterPosted on September 21, 2018 Categories Hot Topics / War Cusub, News, Puntland
Previous Previous post: Mareykanka Oo Iska Fogeeyay Duqeyn Ka Dhacday Saakow
Next Next post: Askari Ka Tirsan Ciidamada Puntland Oo Duleedka Degmada Badhan Ku Dilay Suldaan Caan Ah